ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ BOE သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသားတင် အမြတ် ငွေ ယွမ် ၂၅ ဘီလီယံကျော် မည်ဟုမျှော်လင့် ကြောင်းပြသ သည် – Pandaily
ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ BOE သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသားတင် အမြတ် ငွေ ယွမ် ၂၅ ဘီလီယံကျော် မည်ဟုမျှော်လင့် ကြောင်းပြသ သည်
Jan 21, 2022, 23:40ညနေ 2022/01/22 10:09:18 Pandaily
တရုတ် ဈေးကွက်တွင် ထိပ်တန်း display panel ပေးသွင်း သူ BOE က ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း၏ 2021 စွမ်းဆောင်ရည် ခန့်မှန်းချက်ကြာသပတေးနေ့ ။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် နှစ်စဉ် လည်ပတ် မှုမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂ ၁၅ ဘီလီယံမှ ၂၂၀ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၃၃. ၉ ဘီလီယံမှ ၃၄. ၇ ဘီလီယံ) ကြားရှိ မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
BOE ၏ခန့်မှန်း ချက်အရ စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ များ၏ ရှယ်ယာရှင် များ မှရရှိသော အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၂၅. ၇ ဘီလီယံမှ ၂၆ ဘီလီယံ ကြား ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၄ ၁၀% မှ ၄ ၁၆% အထိတိုးလာ လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ Semiconductor display စက်မှုလုပ်ငန်း သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် သမိုင်းတွင် အရှည် ဆုံး စန်းပွင့် နေကြောင်း ကုမ္ပဏီက ဖော်ပြခဲ့သည်။
BOE က ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် မှစ၍ စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအား ညှိနှိုင်း မှုသည် စက်မှု ထုတ်ကုန်များ၏ စျေးနှုန်း များကို မြင့်တက် စေ ခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကထက် ပိုမို၍ အလားအလာ ကောင်း ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင် တစ် ဦး အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် လမ်းကြောင်းကို အခွင့်ကောင်းယူ ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင် ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ BOE သည် 8K display နှင့် flexible OLED ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် နည်းပညာ အဆင့်မြှင့်တင် မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ၅၅ လက်မ 4K AMQLED display ထုတ်ကုန်များနှင့် 480Hz အလွန် မြင့်မားသော refresh rate professional electrosport display ထုတ်ကုန် များကိုလည်း အောင်မြင်စွာ စတင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BOE ၏ ၆ မျိုးဆက် AMOLED ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို တရားဝင် စတင် ခဲ့သည်
Sigmaintell မှ ထုတ် လုပ်ပြီး BOE မှ ကိုးကား ထားသော အချက်အလက်များအရ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိသော OLED စမတ်ဖုန်း panel သန်း ၆၀ ခန့် တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး တိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် မျက်နှာပြင် များ တင်ပို့ ရောင်းချ မှု သည်တရုတ်နိုင်ငံ တွင်ပထမ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။
ထို့အပြင် BOE က အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် နည်းပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ပြောင်း မှုတွင် ဆန်းသစ်တီထွင် မှုများ မှတစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
Tags BOE | manufacturing sector | OLED Panel | Technologies
Industry Jan 21 ဇန်နဝါရီ 22, 2022
এটি দেখায় যে নেতৃস্থানীয় এন্টারপ্রাইজ বেইজিং ওরিয়েন্টাল ২0২1 সালে ২5 বিলিয়ন ইউয়ান অতিক্রম করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
চীনের বাজারে নেতৃস্থানীয় ডিসপ্লে প্যানেল সরবরাহকারী, বেইজিং ওরিয়েন্টাল, বৃহস্পতিবার ২0২1 সালের জন্য তার পূর্বাভাসের পূর্বাভাস দিয়েছে।